Dr Cumar C/rishiid “Shirka Kismaayo waxa uu marayaa heer aad u wanaagsan” – SBC
Dr Cumar C/rishiid “Shirka Kismaayo waxa uu marayaa heer aad u wanaagsan”
Isagoo maanta shir jara’id ku qabtay magalada Kismaayo ayaa Ra’isal wasaarihii hore ee somaliya Cumar cabdirashiid waxaa uu sheegay in shirka marayo Heer wanaagsan.
Ugu horeyn waxaa uu sheegay in Odayaashii dhaqanka ee gobolada jubooyinka la iskugu keenay kismayo iyagoona ka dooday qaabka loo soo xulayo xildhibaanada gobolada Juboyinka,ee dooran doono dhawan Madaxweynaha Juba-land.
Waxaa uu sidoo kale ku booriyay dhinacyada kala duwan ee ka qayb-galaya shirkani in ay eegaan sidii meel looga soo saari lahaa Maamulka Juba-land ee la doonayo in laga dhiso gobolada juboyinka iyo Gedo.
“Odayaasha waxaa ay sameyn doonaan sidii ay u soo xuli lahaayen xildhibaanada uu yeelan doono Juba-land,waxaana ergada loo soo xuli doona sida loo kala dago saddexdan Gobol” ayuu shirkiisa Jar’id ku Yiri Mudane Cumar Cabdirashiid
Dhinaca kale waxaa uu sheegay dr: Cumar Cabdirashiid in dastuurka somaliya uu ku socdo shirkani isla markaasina aysan jiri wax qilaafsan dastuurka somaliya oo halkaasi ka soconaya, dastuurka somaliyana ay ku qoran tahay in muddo Hal sano gudaheed lagu dhiso Dhamaan Dawlad goboleedyada dalka.
Dhismaha Maamul Goboleedka Juba-land ayaa waxaa uu socday Tan iyo 4-tii sano ee ugu danbeysay isagoona qiray in dhamaan madaxda dawlada somaliya ay taageeraan,iyadoona dawladihii hore ee somaliya dhamaan Taageersanayeen in Dawlad goboleedyada dalka la wada dhiso muddo Kooban.
Ugu danbeyntiina shirka Juboyinka ayaa maraya heerka ugu wanaagsan waxaana odayaasha ay sheegen in sida ugu dhaqsaha badan ay u sameyn doonaan Juba-land,iyagoona maanta saxiixay kalsoonida ay ku qabaan waxa ka soo baxa Dhismaha Juba-land.